ग्यास्ट्राइटिस भए के खाने ? – Medianp
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, जेठ ०१, २०७५०८:०६0
तेलमा तारेका र तेलयुक्त खानेकुरा जस्तै– ससेज, फ्राई आलु, चिप्स, समोसा, जुलेबीलगायतका खाद्यपदार्थको प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यस्तै, मासुमा पाइने बोसो हानिकारक फ्याट हो । यस्ता फ्याटलाई सकेसम्म दैनिक डाइटबाट हटाउन सक्नुपर्छ, नत्र घटाउँदै लैजानुपर्छ । ओमेगा थ्री फ्याटी एसिडलाई भने स्वस्थकर फ्याटका रूपमा लिइन्छ । यसको नियमित प्रयोगले भने ग्यास्ट्राइटिसको असर कम गर्छ । माछामा पाइने तेल, आल्मोन्ड, काजु, एभोकाडो, आलस, चिया सिड आदिमा ओमेगा थ्री फ्याट पाइन्छ । यो खबर नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो
‘अझै रहन्छ प्रि–मनसुनको प्रभाव’
व्रत बस्दा खाइने साबूदाना साकाहारी हो त ? यस्तो छ वास्तविकता
हेर्नुहोस्, रातको समयमा गरिएको यस्तो गल्तीले तौल घट्ने हैन बढ्ने गर्छ! बेलैमा रहनुहोस् सचेत